စင်္ကြံသည်ခေတ်သစ် 5000K Track Lighting - LED ကို Down Light က, LED ပြောက်အလင်း,,LED ကို Track အလင်း,LED ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်း,LED ကို Linear အလင်း,LED လမ်းအလင်းစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » စင်္ကြံသည်ခေတ်သစ် 5000K Track Lighting
ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိ မီးအိမ်အား ကောင်းစွာမတပ်ဆင်ထားသောကြောင့် မှန်ကိုကြည့်သည့်အခါ နောက်ခံမီးကြောင့် မမြင်နိုင်ပါ။
ပစ္စည်းအမျိုးအစား TRCX1001 TRCX2001 TRCX2002 DGCX1001 TXCX1001 ပုံသေ TXCX1002 ပုံသေ TXCX1003 Flexible TXCX1004 Flexible TRC1000A Surface Rail အားလုံး
LED အလင်းအရင်းအမြစ် TRCX1001 TRCX2001 TRCX2002 DGCX1001 TXCX1001 ပုံသေ TXCX1002 ပုံသေ TXCX1003 Flexible TXCX1004 Flexible TRC1000A Surface Rail အားလုံး
input ဗို့အား(V ကို) ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိ မီးအိမ်အား ကောင်းစွာမတပ်ဆင်ထားသောကြောင့် မှန်ကိုကြည့်သည့်အခါ နောက်ခံမီးကြောင့် မမြင်နိုင်ပါ။
ဆီမီးခွက်အလင်းအား flux(LM) 4050
ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိ မီးအိမ်အား ကောင်းစွာမတပ်ဆင်ထားသောကြောင့် မှန်ကိုကြည့်သည့်အခါ နောက်ခံမီးကြောင့် မမြင်နိုင်ပါ။(ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိ မီးအိမ်အား ကောင်းစွာမတပ်ဆင်ထားသောကြောင့် မှန်ကိုကြည့်သည့်အခါ နောက်ခံမီးကြောင့် မမြင်နိုင်ပါ။) -20 – 60
ထုတ်ကုန်အမည် Modern 5000K Track Lighting for Hallways
We areamanufacturer specializing in Aluminium housing & Aluminum heat sink of led lighting for more than 10 နှစ်ပေါင်း.
OEM ကြိုဆိုပါတယ် & ODM ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ငါတို့သည်သင်တို့၏နမူနာသို့မဟုတ် CAD / 3D အားဖြင့်ပုံဆွဲသည်နှင့်အညီထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး.
နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။
Q1. နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။? နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။?
တစ်ဦးက: နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။, နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။, နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။. နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။ 3-5 နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။. နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။. နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။.
Q3. နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။?
တစ်ဦးက: နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။, နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။ 3-5 နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။ 7-15 နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။.
220Zoomable Focus Led Track Light Architecture Commercial Hanging Magnetic Led Track Light
COB Stores များအတွက် Track Lighting LED